World Tourism Network (WTN) no feonao ao amin'ny indostrian'ny fizahan-tany vaovao
Home » Travel Associations News » World Tourism Network (WTN) no feonao ao amin'ny indostrian'ny fizahan-tany vaovao
Fikambanana vaovao ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany no nanjary lohateny lehibe. The Tambajotra fizahan-tany manerantany (WTN) dia efa nanangana toby matanjaka iray fanta-daza ao anatin'izany ny minisitry ny fizahan-tany 24 sy ny solontenan'ny sehatra ho an'ny daholobe.
Ny sehatry ny daholobe dia eo ambany fitarihan'ny Dr. Taleb Rifai, sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha. Ny sehatra tsy miankina dia efa manana talen'ny manam-pahaizana mahavariana.
Voaomana ho feon'ny orinasa kely sy salantsalany izay manatevin-daharana hatramin'ny 31 Oktobra dia afaka miditra ao amin'ny fikambanana amin'ny maha mpikambana mpanorina azy.
Mpandraharaha fizahan-tany 820 avy amin'ny firenena 125 sy Etazonia 31 no efa voatanisa ao amin'ny tranonkalan'ny fikambanana www.tv.travel Ny WTN dia miara-miasa amin'ireo fikambanana sy fikambanana handrakofana na inona na inona manomboka amin'ny fampiasam-bola, ny asa aman-draharaha hatramin'ny tamba-jotra sosialy. Nanjary mpikambana androany ny SKAL International.
Ny fanombohana ofisialy dia kasaina hatao amin'ny 9 Novambra.
Hanana toko mahaleo tena eo an-toerana ny fikambanana ary sehatra fandraharahana hamoronana orinasa, fampiasam-bola ary fidirana an-tsehatra amin'ireo mpiaramiasa amin'ny fizahan-tany sy fizahan-tany. Tanjon'ny WTN ny hanome feo ho an'ny mpikambana ao aminy feo mahery eo an-toerana sady hanome azy ireo sehatra iraisam-pirenena.
World Tourism Network (WTN) no feo efa ela niverenan'ireo orinasa kely sy salantsalany fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany. Amin'ny alàlan'ny fampitambarana ny ezaka, ny WTN dia hametraka eo an-tampon'ireo filàna sy hetahetan'ny orinasa kely sy salantsalany ary ireo mpandray anjara aminy.
Amin'ny fampiarahana ireo mpikambana ao amin'ny sehatra tsy miankina sy tsy miankina amin'ny sehatra isam-paritra sy manerantany, ny WTN dia tsy vitan'ny mpisolovava ho an'ny mpikambana ao aminy fa manome feo azy ireo amin'ny fivorian'ny fizahan-tany lehibe. WTN dia manome fotoana ilaina sy tambajotra ilaina ho an'ireo mpikambana ao amin'ny firenena 125 amin'izao fotoana izao.
WTN dia manome feo politika sy raharaham-barotra sarobidy ary manolotra fiofanana, consulting ary fotoana fanabeazana.
Ny programa "Cities Small Tourism Cities of the World" dia mamorona fotoana vaovao amin'ny alàlan'ny fampitambarana ireo sehatra miankina amin'ny fanjakana sy tsy miankina amin'ny fikatsahana fitomboana, fampanjariam-bola, fidirana an-tsehatra, fiarovana ary fiarovana.
Ny “Famerenana indray ny dia" fandraisana andraikitra dia fifanakalozan-kevitra, fifanakalozana hevitra ary fampisehoana ho an'ny fomba fanao tsara indrindra ataon'ireo mpikambana ao amin'ny firenena mihoatra ny 120.
Ny “Maherifo momba ny fizahantany" Ny loka dia manaiky ireo izay mandeha lavitra manompo ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany fizahan-tany nefa matetika no tsy jerena.
Ny “Tombo-kase fizahan-tany azo antoka" manome ny mpiray antoka amintsika sy ny toerana itodihany sehatra hanehoany ny fahavononany hanokatra indray ny fizahan-tany soa aman-tsara.
Ny mpikambana WTN dia ekipan'i WTN.
Ny mpiara-miombon'antoka WTN dia tanjaky WTN.
Tsindrio eto raha hiaraka amin'ny WTN ho mpikambana mpanorina
Ny World Tourism Network dia fikambanana manerantany miaraka amin'ny foibe any Etazonia. Fanazavana fanampiny: www.tv.travel
Tsena fananganana hafanana hafanana 2020 | Fampiharana sy vinavina amin'ny ho avy amin'ny 2026
Sarin-tànana amin'ny fandidiana ny tsena amin'ny ho avy sy ny fitomboan'ny indostria amin'ny taona 2020-2026